डा. अरुणा उप्रेती भन्छिन्- जन्मदिन मनाउने केकसँगै का’टिँदै’छ हाम्रो धर्म संस्कृति - Nepal Insider
Home/समाज/डा. अरुणा उप्रेती भन्छिन्- जन्मदिन मनाउने केकसँगै का’टिँदै’छ हाम्रो धर्म संस्कृति
केही समययता हामी नेपालीमा ‘केक’ मोह निकै धेरै देखिएको छ। सर्वसाधारण, फिल्मकर्मी र नेतासम्मले आफ्ना अवसरहरू केकले रंगाएको देखिन्छ।केही समयअघि नयाँ शक्ति पार्टीले झन्डै ९१ किलोको बडेमान केक काटेर आफ्नो वार्षिकोत्सव मनाएको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले क्रिकेटमा सफलता हासिल गरेको बधाइ दिन कप्तान पारस खड्का र उनको समूहलाई केक नै खुवाए।यता सामाजिक सञ्जालमा छाएका तस्बिर हेर्दा लाग्छ, केक कतै टुट्दैन, हामी केकमय भयौं।
केक र नेपाली उत्सव पर्यायवाची बनेका छन्।केटाकेटीलाई त जन्मदिन भनेकै केक का’ट्ने भन्ने परेको छ। ठूला मान्छे पनि त्यही मनस्थितिमा छन्।तर, हामीले कहिल्यै विचार गरेका छौं, केक काट्ने चलन फैलाएसँगै हामी के भुल्दैछौं?
समाजको नेतृत्व गर्ने नेताहरूले कस्तो बाटो देखाउँदैछन् ?हाम्रो परम्परा र संस्कृतिले जन्मदिन वा उत्सवमा गर्न सिकाएका विधि र खानेकुरा हराएको हामी वेवास्ता गर्दैछौं।समयसँगै राम्रा परम्परा धानेर राख्नुपर्ने अवस्थामा नेपाली संस्कृति बिर्सेका छौं। अन्य देशको संस्कृति देखासिकी गरेर केक का’ट्न थालेका छौं।
तर उनीहरूले बिर्सन्छन् कि लामो कुराले मात्र संस्कृति जोगिइँदैन, फैलिदैन, पहिचान हुँदैन।संस्कृति फलाउन–फूलाउन व्यवहारिक रुपमा पनि अवलम्बन हुनुपर्छ। नेतृत्वमा बसेकाले उदाहरण दिनुपर्छ। समाजलाई सिकाउनुपर्छ।
संस्कृतिबारे अध्ययन गरिएका किताबलाई सकेसम्म धेरैले पढून् र व्यवहारमा उतारून् भनेर प्रेरित गर्नुपर्छ।हामीकहाँ भने स्थिति उल्टो छ। बाहिरी संस्कृति यति हावी छ, आफ्नो संस्कृति नयाँ पुस्ताले बिर्सिन थालिसक्यो। विदेशी संस्कृति अपनाउनै हुन्न भन्ने होइन, तर त्यसमै बिलीन भएर आफ्नो पहिचान नै मासेर त्यसलाई बढावा दिनू भनेको आफ्नै खुट्टामा ब’ञ्चरो हा’न्नु हो।
केकरुपी अवसरले हाम्रो संस्कृतिको पहिचानमा मात्र होइन, स्वास्थ्यमा पनि धक्का दिइरहेको छ। विशेषगरी हाम्रा स–साना नानीबाबू जसले हाम्रो पहिचान धानेका छन्।विदेशमा बन्ने केकबारे म पुष्टि गर्न सक्दिनँ। तर, नेपालमा बन्ने धेरै केक अस्व’स्थ्यकर छन्। धेरै चिनी र वनस्पति घ्यूले भरिएको केक हाम्रा नानीबाबूले खाइरहेका हुन्छन्। उनीहरूको घरमा पनि केक नै का’टिन्छ, कतिपय स्कुलले पनि त्यही गरिदिन्छन्।
यसले उनीहरूलाई के सिकाउँदैछ? जन्मदिनमा हामी के आर्शीवाद दिदैछौं?‘तिमीहरूको मुटु खराब होस्। चिनी धेरै खाँदा हुने रोग लागोस्।’अनि,‘तिमीहरूको मौलिक संस्कृति बिर्स। जन्मदिनमा मैनबत्ती निभाएर जीवन अँध्यारो बनाउने कला सिक।’हामीले मनले यी कुरा नभने पनि व्यवहारले यही सिकाउँछ।
केक त मात्र एउटा प्रतिक हो, जसले हामी कसरी आयातित खराब संस्कृतिको शिकार भइरहेका छौं। हरेक संस्कृतिका राम्रा र खराब पक्ष हुन्छन्। हाम्रा पनि धेरै खराब पक्ष छन् जो हटाउनू छ।विदेशीका पनि धेरै राम्रा संस्कृति छन् जो अवलम्बन गर्न सकिन्छ। तर हामी यसमा भने पछाडि छौं।
हाम्रो संस्कृतिमा जन्मदिनमा घरआँगन र मन्दिरमा दियो बाल्ने चलन छ। अचेल हामी केकमा मैनबत्ती बाल्ने अनि निभाउने संस्कृतिमा भिजेका छौं।हाम्रो आफ्नो चलन मास्दै छौं। योसँगै जीवनका सुन्दर पक्ष पनि नष्ट पार्दैछौं।यस्तै हो भने केही वर्ष सायद हाम्रा संस्कृति किताबमा मात्र सिमित हुनेछन्।
केक काट्ने संस्कृति यति व्यापक हुँदैछ कि, अबका केही वर्षमा हाम्रा सबैजसो उत्सव र चाडपर्वमा केक नभइ नहुने चलन बस्ने संकेत देखिँदैछ।बच्चाको ‘भात खुवाइ’ होइन ‘केक खुवाइ’ हुन बेर लाउँदैन। दाल, भात, तरकारीको स्वाद बिर्सिएर, ‘केक’ नै नेपाली खाना बन्न सक्छ। विवाह, व्रतबन्धमा थरिथरिका केक काट्ने चलन नबस्ला भन्न सकिन्न।
सुन्दा अचम्म लाग्ला, तर केक संस्कृति पक्डिन जसरी हामी दौडिरहेका छौं, त्यो गतिले यी दिन पर छन् भन्ने लाग्दैन।केक नका’टौं भनेको होइन, स्वस्थकर केक खाऔं, आफ्नो संस्कृति नभुलौं!सेतोपाटीबाट (लगभग एक बर्ष पहिले प्रकाशितलेख)
डा केसीलाई खुला पत्र – “महाराजगन्ज कलेजले लिएको प्रवेश परिक्षाको प्रश्न पत्र चोरि हुँदा तपाईंले नियुक्ती गरेको अग्रवाल माथि किन प्रश्न उठाउनु भएन ?